MPIKALO – Fikambanan’ny mpikabary katolika eto Madagasikara – Ecar Sainte Anne Anjomakely
= »alignleft » width= »272″] Mpikalo[/caption]
Ny mpikalo na Fikambanan’ny mpikabary katolika eto Madagasikara dia vaomieran’asa iray mijoro ao anatin’ny vovonana’ny olon-dehibe na VONA. Manana ny sata mifehy azy manaraka ny satan’ny diosezy izy ary manana ny aomonié sy ny birao eo anivon’ny diosezy ihany koa. Ny hitarika ny olon-drehetra hanana fitondra-tena mendrika sy marina no isan’ny tanjona iray lehiben’ny mpikalo eo anivon’ny fiarahamonina sy ny fiangonana, izany dia atao amin’ny alalan’ny fampianarana ny soatoavina Malagasy sy ny tenin’Andriamanitra amin’ny Kristianina tsy ankanavana ary tsy mifidy taona na saranga.
Fanaon’ny mpikalo ny mifampiarahaba tratry ny taona isaky ny voaloan’ny taona, tamin’ny ity taona 2014 ity izao dia natao tao amin’ny Falda Antanimena izay tamin’ny faha – 23 ny volana febroary lasa teo. Fihatahana masina, fitsangatsanganana, fianarana baiboly ary indrindra ny sorona masina fitsofandrano sy ny lanonana famoahana andiana mpikabary nahavita fianarana isataona no endrika isehoan’ny fihaonan’ny mpikalo manerana ny diosezy. Ho an’ny mpikalo eto amin’ny Paroasy Anjomakely kosa dia isaky ny alahady ao aorian’ny lamesa voalohany ary ao amin’ny efitranon’ny fianarana Mb Anne Anjomakely no anatanterahana ny fihaonana izay miseho amin’ny alalan’ny fianarana soatoavina malagasy dia ny kabary izany.
Raha tsiahivina dia efa niorina manodidina ny folo taona teo anivon’ny diosezy ny mpikalo , fa kosa iray taona sy tapany raha teto amin’ny paroasy Anjomakely no asian-teny. Efa namoaka andiany maromaro teo anivon’ny diosezy ny mpikalo dia ireto avy izany : Andiany Frera Louis RAFIRINGA, Lous de Gonzague, Victoire RASOAMANARIVO, Jeaques Berthieu, Kardinaly Gerome RAKOTOMALALA, Kardinaly Victor RAZAFIMAHATRATRA, Joany Paoly Faharoa, Kardinaly Armand Gaetan RAZAFINDRATANDRA, ary Mompera RAHAJARIZAFY. Teto amin’ny paroasy Anjomakely dia andiany Rahajarizafy no nanomboka azy.
Talohan’ny fikambanan’ny mpikalo teto amin’ny paroasy dia niaraka tamin’ny Ambatofotsy ary niaraka tamin’ny Rantsana LOHASAHA Distrikan’Ambohijanaka. Ankehitriny kosa dia efa mahaleo tena manaraka ny fahaleovantenan’ny fiangonana ihany koa. Efa mijoro ny birao mahaleo tena eto Anjomakely izay tarihin’Atoa Doudou, misy ihany koa ny dingana faharoa eto amin’ny paroasy izay miaraka amin’ny Ambatofotsy. Ny fampandehanana ny fampianarana eto Anjomakely sy Ambatofotsy dia eo ambany fitarihan’Ato RAZAKAHARIVELO ANDRIANTSIAFOY na NDRETSA mpikabary izay nahazo alalana amin’ny mpitondra mopera aomonia Dominique Rolland Marie sy ny Filohan’ny mpikalo Ato René RAKOTOMALALA miaraka amin’ireo mpiofana ho mpikabary izay miisa 16 amin’ity andiany 2014 ity.
Tags: Anjomakely, Katolika, Mpikabary, Mpikalo